Ny holatra poloney (chestnut mokhovik): azo hanina na tsia, famaritana ny zavatra hita maso, ny toerana itomboany sy ny fotoana, ahoana no mahandro (mofomamy, mahandro, mofomamy) - Holatra - 2019
Fisotroan-dronona poloney: mari-pahaizana, habaka, fanatsarana
Ny fandehanana any amin'ny ala fararano dia manome fahafahana hiaina rivotra madio, hankafy ny hakanton'ny natiora ary hanangona holatra. Mandeha amin'ilay "fihazana mangingina", mila mifantoka amin'ny famokarana holatra ianao. Ao amin'ny lahatsorantsika dia hiresaka momba ny iray amin'izy ireo isika - Poloney.
Rahoviana sy aiza no angonina
Inona no mety hitranga: holatra diplaoka
Ahoana ny fomba hanadiovana
Ahoana ny handrahoana
Ahoana no hanangonana
Hanina na tsia
Manana anarana maromaro izy - io no pansky sy kastagnety, ary koa "ny mpanjakan'i mokhovikovs" na Oleshek. Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Amin'ny endriny dia mitovitovy amin'ny boletus izy ireo, matetika izy ireo no misafotofoto. Tena vokatra tsara sy mahasalama ity. Saingy, indrisy, tsy dia mahazatra loatra izany ho an'ny mpangalatra pilina.
Mokhovikov dia an'ny holatra fotsy noho ny vatan'ny hoditra amin'ny cap.
Fantaro ireo karazam-bibikely malaza indrindra sy tsy azo itokisana.
Ao amin'ny tanora mokhovikov dia tapaka ny sisin'ny kapa, ary amin'ny matotra - ambony. Mitovy amin'ny kofehy manana endrika 10-14 cm izy io. Mety misy karana na volomparasy somary mena na maivana. Tsy mora ny manala ny hoditra.
Tavoahangy mavo. Eo amin'ny kofehy miaraka amin'ny tongotra dia misy tsotsotra kely. Ny halavan'ny fantsona dia eo amin'ny 2 cm, misy pore kely kely izy ireo, izay, rehefa matotra, dia lasa lehibe kokoa ary manova ny lokony amin'ny mavo.
Ny holatra poloney amin'ny teny poloney indraindray dia antsoina hoe poloney fotsy, saingy tsy marina tanteraka izany. Nipoitra io anarana io noho ny loko fotsy amin'ny vatan'ny cap. Indraindray dia mety mavo. Raha manery ny nofo ianao, dia miova ho manga ny loko. Ny fofon'ny holatra, mahafinaritra.
Maivana kely, ary indraindray amin'ny kirany kely, ny tongotra eo amin'ny fotony dia mihamitombo. Ny haavony dia maherin'ny 10 santimetatra, ary ny diam-penina dia manodidina ny 3-4 cm. Ny loko dia maitso na volomparasy. Maivana ny nofo, maka volom-borona manga eo amin'ny loaka.
Oleshki dia tsy mitombo na aiza na aiza. Tsy miraharaha ny haintany izy ireo ary mankafy ny toetr'andro any avaratra. Noho izany, afaka hita any Eorôpa na any amin'ny Farany Atsinanana izy ireo.
Oleshki dia mamorona mycorrhiza miaraka amin'ny fakan'ny hazo aviavy. Mahalana izy ireo no hita eo ambanin'ny oaka na kestnut. Mila mikaroka karazam-bolo any anaty ala mikitroka ianao amin'ny ala mikitroka. Vetivety eo akaikin'ireo kofehy, dia tsy mitombo izy ireo.
Ny vanim-potoan'ny fanangonana azy ireo dia manomboka rehefa mipoaka ny fotsy sy ny volony. Mokhoviki dia mitombo ao anaty vondrona vitsy lavitra. Alefaso ny tontolo iainana miteraka.
Zava-dehibe izany! Tokony hotsarovana fa ny holatra, toy ny sponjy, dia mandray ny zavatra rehetra avy amin'ny tontolo iainana. Noho izany dia ilaina ny manangona azy ireo eny amin'ny arabe sy orinasa samihafa.
Ny holatra poloney amin'ny endrika ivelany dia mitovitovy amin'ny holatra mangahazo, karaoty bobongolo, ary karazana maitso. Saingy ireto karazana ireto dia azo sakanana:
Ao amin'ny karôkôlà dia bobongolo boribory matevina misy toto mena. Loko mavo mavo. Ny tongotra dia marefo. Fitadiavana sakafo;
Ny kodiarana maitso dia manana satroka matevina miaraka amin'ny fotsy maitso. Izy io dia samy hafa amin'ny pôrôgôma lehibe boribory marevaka. Ny fihenan'ny filaminana dia mihamangatsiaka;
Ny holatra balsama, na dia tsy manan-danja aza ny poizina, fa tsy azo iantsoana azy ny fihinana. Eo amin'ny tongotra dia misy lamina. Raozy raozy. Manana tsiro mangidy izy io. Rehefa tapahina dia mandefa tar.
Koa satria holatra vaventy sy satanika ny vondron'ireo holatra tsy azo antoka, dia hianatra ny fomba hamantarana boletus sandoka-boloky, raozy tsy azo tsinontsinoavina, sham-beetles, etona holatra.
Ny holatra satanika dia heverina ho jadona mampidi-doza. Ny toetra mampiavaka azy dia:
Ny satroka dia maitso na maitso. Ny kofehy rongony dia mena;
leg miaraka amin'ny loko mena, eo ambany - biriky miloko, ary amin'ny ambony - orange;
Rehefa simba ilay loko, dia lasa mena ny pulpan ary lasa manga.
Zava-dehibe izany! Ny nofon'ilay holatra avy any amin'i Satana dia misy fiantraikany eo amin'ny foitran'ny respiratory ary mahatonga ny paralysisa.
Ny votoatin'ny kalôria amin'ny vody dia eo amin'ny 18 kcal. Ahitana proteinina 1,8 g izany, 0,7 g ny voankazo sy ny vozona, manodidina ny 1.4 g.
Oleshok dia manana firafitra vitaminina sy mineraly be mpanankarena. Anisan'izany ny vitaminina vitan'ny vondrona B - B9, B6, B2, B1.
Vakio ihany koa ny toetra mahasoa sy fampiharana any amin'ny sampana samihafa holatra: holatra holatra, boletus, ceps, shiitake, chaga (holatra biriky).
Ankoatra azy ireo dia misy:
Oleshek dia rano 90%. Ao aminy dia misy mono - sy disaccharides, ary asidra amina 10 amino (ohatra, tianin). Ity asidra amino ity dia mampidina ny tosidrà ary manamafy ny fiantraikany.
Fantatrao ve? Ny holatra poloney ao amin'ny holatra Boligara dia ambony noho ny legioma sy voankazo.
Ankoatra ireo fitaovana ireo dia misy koa ny:
varahina sy singa hafa.
Ao Chitin dia misy any amin'ny holatra, izay afaka manadio ny vatana.
Mokhoviki, na dia anisan'ny sokajy faharoa aza izy ireo, dia heverina ho zava-maitso. Avy amin'izy ireo ianao dia afaka mahandro sakafo sy salady, manitra ho an'ny pizza sy pizza. Mafana, maina, voatafika ary mangatsiaka izy ireo. Ao anatin 'ny dabam-pisiana mahandro dia misy fofona mahafinaritra. Amin'ny fitehirizana araka ny tokony ho izy dia mitazona ny fananany mandritra ny 6 volana eo io voankazo io. Ny votoatin'ny proteinina dia mitovy amin'ny hena, noho izany dia azonao atao ny mampiasa izany ho an'ny sakafo vegaretiana.
Fantatrao ve? Avy amin'ny mokhovikov dia mahazo loko sakafo, mavomavo mavo, ary raha mampiasa jiro iray ianao, avy eo - mavokely na volamena.
Alohan'ny hanangonan'i Oleshki:
esory ny tsimokaretina, ny ahi-maitso ary ny fako;
kobam-bary sy sisa tavela amin'ny mycelium;
esory ny hoditrao amin'ny kapa;
manasà rano imbetsaka amin'ny rano mandeha;
misotro rano mandritra ny ora maromaro;
manasà fotoana vitsivitsy.
Rehefa mipoitra amin'ny vinaingitra saline izy ireo, dia tsy ho toy ny crumbly, raha mbola tavela ny kankana, dia ho faty izy ireo, ary ny fitrandrahana rehetra dia hipetraka amin'ny farany.
Manoro hevitra anao izahay hamaky momba ny teknolojian'ny holatra fikarakarana: manangom-bokatra (chanterelles, holatra holatra, holatra rosia, ryadovki), manangom-bokatra (holatra maina), maina (holatra holatra), mangatsiaka (fotsy, holatra, sakaosy, holatra, holatra).
Misy ny mino fa tsy afaka mahandro ny holatra poloney, ary manala azy avy hatrany. Fa tsara kokoa ny tsy mampidi-doza izany.
Samy rakotra 2 na 4 ny mari-pamantarana lehibe, ary ny kely dia havela tsy misy.
Maka menaka lehibe izahay, satria mavesatra be ny vokatra.
Omano imbetsaka mandritra ny 20 minitra, manova ny rano.
Oleshki haingana dia maizina, koa araho izy ireo avy eo na avelao izy ireo amin'ny raozy.
Matetika ny mohovichki marinate. Izao no ilaintsika:
1 kilao loafie;
menaka (voninkazo na oliva).
1 l rano;
1 tbsp. L. ny sira;
1 tbsp. L. siramamy;
4-5 tongolo gilasy;
3-4 bay ravina;
5 sombintsombiny jirofo;
50 ml vinaingitra.
Toy izao manaraka izao ny fizotry ny fikarakarana:
Ny vokatra voasasa sy namboarina (tapahantsika ny ampahany betsaka amin'ny faritra maro) dia araraka amin'ny rano sotroina (1 litatra ny rano - 1 tsp. Sira) mandritra ny 5 minitra aorian'ny fofony.
Mofo mena, manasa ny Oleshki.
Fenoy rano indray ny sira ary avereno antsasak'adiny aorian'ny sivy.
Aforeto sy ario.
Manaova marinade ary andao 7 minitra.
Ampitahao mohovichki miaraka amin'ny marinade amin'ny siny matevina.
Ambony amin'ny menaka kely.
Arofana amin'ny lamba ary atsangano.
Nofaranana tamin'ny hafanana iray ary niala sasatra.
Mitahiry toerana mahafinaritra (vata fampangatsiahana na lakozia). Bon appetit!
Faly izahay fa nanoro hevitra ny toerana hahitana holatra poloney sy ny fomba hanavahana azy ireo amin'ny hafa, anisan'izany ny poizina. Ankafizo ny fanangonanao azy ireo, ary ny sakafo matsiro izay azo amidy miaraka aminy.
Fanamarihana avy amin'ny mpampiasa tambajotra:
Nifankahalala tamin'ny holatra poloney aho 5 taona lasa izay. Eny, fantatro fa misy holatra toy izany ary azo hanina, saingy tsy misy ilàna azy io, misy foana ny zava-drehetra. Ary avy eo, tao anatin'ny herintaona dia tsy nisy na inona na inona holatra sy syroezhek ary horohoro araka izay tiany holatra. Tsy manangona holatra sy holatra holatra, izany hoe ala. Mandeha mamakivaky ny ala amin'ny solaitrabe izahay, i Oleg sy izaho dia namakivaky ny ranomandry miloko poloney milky, izay saika ny rehetra, jereo 5, tsy misy intsony. Namory izy ireo, nitondra ny tranony, nisy sombin-kazo 2.5 tonga. Tena nahafinaritra azy ireo izahay. Ny reniko dia miantso azy ireo fotsiny hoe "niboridana." Mamoa izy ireo amin'ny tapaky ny volana jolay ary amin'ny folo taona faharoa amin'ny Septambra, saingy tsy afaka mahita betsaka isika, na dia mitombo ao amin'ny toerana iray isan-taona aza izy ireo.
Mora ny manavaka ny holatra amin'ny holatra fotsy, satria rehefa manindrona ilay holatra eo ambanin'ny cap dia mampitony manga. Eny, ary manana loko matevina ny tongony, amin'ny fotsy dia fotsy na maivana kely. Raha nangonina tanora ny holatra dia nakambana sy nakodiadia ho banky ho an'ny ririnina. Raha efa antitra loatra izy ireo, dia maina. Nantsoin'izy ireo izany satria niely patrana tany amin'ireo ala avaratr'i Polonina izy ireo, avy any Polonina ary nitondra azy ireo tany amin'ny firenen-kafa.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fisotroan-dronona poloney: mari-pahaizana, habaka, fanatsarana